I-eFootball PES 2020 Igeyimu Yevidiyo Esemthethweni ye-EURO 2020 | Izindaba zamagajethi
I-eFootball PES 2020 umdlalo wevidiyo osemthethweni we-EURO 2020
UKonami usanda kumemezela isivumelwano esikhethekile ne-UEFA sokuqoka lo I-eFootball PES 2020 njengomdlalo wevidiyo osemthethweni womqhudelwano olandelayo we-EURO 2020. Ngalokhu, abakushoyo kusuka kunjiniyela owaziwayo yilokho bazokwethula okuqukethwe okulandekayo khona ngekota yesibili yonyaka ozayo.
Ngale ndlela, amalungelo kaKonami kulo mncintiswano asho ukuthi izimbangi zakhe azikwazi ukwethula okuqukethwe kule EURO 2020 lokho Izoqala ngokusemthethweni ngoJuni 12, 2020Yize kuliqiniso ukuthi lo mncintiswano ubusebenze izinyanga ezimbalwa nokuthi isigaba sokuhlunga esisemthethweni siphela ngoNovemba walo nyaka.
Okuqukethwe kwe-UEFA EURO 2020 DLC kuzokwengeza zonke izindaba zomncintiswano
UKonami uqobo uyakuqinisekisa lokho ngemuva kokusayina amalayisense no amaqembu angaphezu kuka-50 ebhola lezinyawo azokwethula kuwo I-eFootball PES 2020 banakho konke okudingayo ukuheha abalandeli balo mncintiswano. Ngokusobala umpetha obusayo we-UEFA EURO iPortugal naye uphakathi kwalabo abazofika kulo mdlalo. Lolu hlobo lwesivumelwano lubuye lungeze konke okubhekise emaqenjini, kusukela ngemibala yamajezi, abadlali, amabheji nakho konke okwenziwe kabusha kuya kumamilimitha ngaphambi kokuba iNdebe yoMhlaba iqale ngoJuni.
Futhi ekugcineni, esitatimendeni seKonami ne-UEFA kukhulunywa futhi nge ukwakhiwa komqhudelwano we-eEuro2020, umncintiswano we-eSports ozodlalwa kuphela kwi-eFootball PES 2020. Umklomelo wamaqembu angu-16 ahamba phambili ahlukaniswe kulo mncintiswano kuzoba ukuya eLondon ukuyohlanganyela emcimbini ohlangothini khona lapho imidlalo yamanqamu neyamanqamu e-UEFA EURO 2020.
NgoSepthemba 10 olandelayo I-eFootball PES 2020 Izotholakala ku-PlayStation 4, i-Xbox One naku-PC. Endabeni ye-DLC ye-UEFA EURO 2020, ukwethulwa kwayo kuhlelelwe ikota yesibili yonyaka olandelayo futhi kusobala ukuthi kuzoba ukulanda kwamahhala.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Amakhonsoli » I-eFootball PES 2020 umdlalo wevidiyo osemthethweni we-EURO 2020
UXiaomi wethula iMi 9T Pro eSpain nakwamanye amazwe